Fiaraha-miasan’ny Commune Urbaine Toamasina sy any ivelany
Nandray vahiny avy any Nigbo, any Chine ny C.U Toamasina
Mitohy indray ny fiarahamiasa eo amin’ny tananan’ny Nigbo, any chine sy ny Commune Urbaine Toamasina. Noamafisana izany tamin’alalan’ny fitsidihanan’ ireo delegationina avy any Nigbo , izay notarihin’ny Atoa WU Hemin “Vice president du Comit� Permanent de l’Assembl�e Populaire Municipale de Ningbo” sy ireo mpiaradia aminy, teto Toamasina tamin’ny 14 martsa 2014 lasa iny, tao amin’ny efitrano fandraisam-bahiny, ka noraisin’ny filohan’ny Delegationina tananan’ny toamasina na PDS.
Eo amin`ny sehatra ara-barotra, toe-karena, fampianarana ambony sy ny kolotsaina no tena mampifandray izy roa tonta. Raha araka ny tatitra izay nataon’ny PDS eto Toamasina, Atoa Toile RAZAFINDRABARY, efa 3 ny isan’ny mpianatra izay efa nahazo vatsi-pianarana makany Chine tamin`ny taona 2012 ary niakatra ho 8 izany amin`ny taona ity. Efa intelo nandefa mpanankanto avy eto Toamasina ihany koa ny etsy ankilany, mba fampisehoana sy fampizarana traikefa eo amin’ny kolotsaina.
Nisy ihany koa ny fitsidihana ny seranantsambon’ny Toamasina natan′izy ireo, izany noraisin’ny Tale jeneralin’ny Seranantsambon’ny Toamasina,ary nitohy ny resadresaka zay noravahan′ny zavankanto mampiavaka ny Toamasina, tao amin`ny Bateau Yvre, zay natolotron’ny mpanao vakodrazana maro eto Toamasina, sady mba nahafan’ny rehetra nifanerasera fa indrindra tamin’ireo mpandraharaha avy eto Antoerana.
Voaresaka tamin’izany fa hisy ny fanorenana ny fotondrafitrasa ahafahana mampandroso ny tananan’ny Toamasina sy ny mponina ao aminy. Ho tohizana sy hatsaraina ihany koa ny fifanakalozana ara-barotra ho an’ny mpandraharaha sy ny fifanakalozana ara-javakanto eto Toamasina.
Ireo fiarahamiasa rehetra ireo dia miatomboka amin`ny ity taona 2014 ity avokoa, araka ny resaka nataon’ny PDS avy eto Toamasina.
(34) Anderson RAVO : 17-03-2014 - 10:00